AMISOM iima dhaanto ALSHABAAB! – Bashiir M. Xersi
AMISOM iima dhaanto ALSHABAAB!
Posted on 28 Jun 2015 28 Jun 2015 by Bashiir M. Xersi	Posted in Qoraallo
Inaan arkay, Amxaaro loo wacanayo, si beelo iyo Alshabaab la isaga caabbiyo, la yaab iguma noqon, balse, in AMISOM lagu laayey dagaal ay la galshay Alshabaab, inta lala jirsado, Alshabaab la dhaleeceeyaa, waxay igu noqotay qaadan waa iyo amakaak!
Dadka sidaa samaynayaa, ma ahan; xildhibaanno, wasiirro iyo hawlwadeenna dawladda ka tirsan, oo kuwaa waaba la garan karaa, ee waa dad caadi ah, sidayda iyo sidaada oo kale. Micnaha dad ku jira, shaqooyinka gaarka ah, qoys dhaqasho, ilma korsi iyo xamaal. Waxa aan la yaabbanahay, ma ahan, in falkaa gurracani ka soo fulo, ama inay ku dhiirradeen, ee waa maxaa ku xiiray? Maxay ka damacsan yihiin? Maxaa ka dambeeya falceintan? Micnaha waxaanan wali garan, waxa sababi kara.
AMXAARO qolo iyo qabiil aan u xeraysan ma jiro, si gaara waliba qof walba, oo xukun iyo xildoon ahaa, marka laga reebo dad fara ku tiris iyo “Naadir xukun ma leh!”.
Laga soo billaabo Jabhadihii dagaalka la galay, ee riday Rajiimkii MSBarre (Aabbaha burburka Soomaaliya), qabqablayaashii ka farcamay, ee intii hartay, aan caymine, sii haraatiyey, xerta Ahlsunno, ee Gobollada Dhexe iyo qofyaalka urur diimeedka aan hubaysnayn ka tirsan, ee xukunka soo qabtay, walina haya, qabanna doona aayaha dambe, intaa iyo in qarsoon, oo aan muuqan, ma jiro koox aan Amxaaro iyo Xabashi u dabafariisan, sidii ay xukunka u qabsan lahaayeen.
Halkaa waxaa ku baxday, cadawtooyonnimadii nagala dhaxaysay Xabashi, ee teer iyo yaraan, nalagu soo barbaarshay, heer ay marayso; in loo xagliyo, xabiibna laga dhigto. Waagii aan yaraa, waxaa la dhihi jiray; “Xaasidsanaa, ma Xabashiyaa!” hadda, waxaa la is yiraa: “Xabiibsanaa, ma Xabashiyaa!” Alla xaalku muxuu is rogay, waayuhuna is badaleen, xigtaduna doorsoontay!
“Xabiibi xabadka i saar
Xabiibi xiddigtaan xiro!”
Haddii Xabashigii xabiib noqday, oo xafiisyada dawladda, xeryaha ciidanka qaranka, xaafadaha dadweynaha iyo xashka xagal walba, oo dalka ka mid ah iska soo xaadiriyeen, miyaan sugayey sida niyadsamida iyo kal xaarnaanta ah, ee Xabashi loo soo xeryagashtay, in AMISOMna loogu doodayo.
Wax kale ma ahan, ee labada ciidan ayaa kala duwan, oo Xabashidu waa nala daris, dano dahsoon iyo dibinyaanyo nala raba, qaarna hore noogu soo dhigtay, oo nala heshay, walina noo caabboon, oon quusan, saa waxay ku quusataba, ma arage, ayna fududaysay cabburintii Rajiimka, xukunka ay marooqsadeen, ka dibna ay isku meereen, oo bulshada qofkii aan FAQASH ahayn ama rajiimka ku beel ahayn laga dhawray xil sare iyo xaalinnimo, ayna ka daba martay, dagaal beeleedkii iyo beladii ka dhalatay, isu turid la’aantii iyo beelo la duldegay, oo aan dareenkooda iyo damqashadooda midna la tixgelin iyo Wahaabiyadda shaararka badan leheed, ee dalkan halaaggiisa qaybta laxaadda ah ku leheed.
Halka AMISOM yihiin ciidan u yimid, wax lagu sheegay nabad ilaalin iyo abuurid xasillooni, balse, u badalay xasarad, xasuuq, xoolo urursi, musuq, kufsi iyo amar ku taaglayn, markaasna aysan jirin, wax gaar ah, oo loogu damqado ama lagu xabiibsado, maadaama, aannaan is aqoon, dalkana aysan sii joogi doonin, oo mar ay noqota, mar uun dalalkoodii ku laaban doona, halka Xabashi, aysan halkaa ka guuridoonin, anaguna, aan sii deganaadoonno.
Qofka Xabashida taageerada u muujinaya, waxaa ka keenaya dhawr arrimood, oo kala noqon kara;
– Inuu ka dhashay beel aan hubaysnayn, dhib iyo dhibaalna tirsanaya, si kale, oo uu ku aargoostana aqoon.
– In uu yahay, sidiisaba qof u dhashay ducfi iyo dadnimo liidnaan, yahin ah, iskana oggol, dullinnimo walba.
– In jaajuus, dabadhilif iyo shisheeye kalkaal yahay, oo dhuuni, dhadhamo iyo dhaqaale u geeyey, kuma sii jirto, haddiiba, darajo iyo dallacaad lagu mudanayo.
Ewel, inta badan, waxaa oo xumaan ah marka la samaynayo, waxaa loo samaynayey ogaal, kas iyo maag, oo qof walba, wuu ogaa inuu qalad iyo qallooc falayo, balse, ma jirin marna, isla qummanaan, uu qawmiyadda Soomaali soo dhexqotomin karay, dhuumaalaysi iyo dhibaan isaga celinaynaa ayuu ahaa qodobka la cuskado, si loogu qiiliyo Xabashi jeclaysiga.
Hadda xaalku sida waa iska badalay, oo xerta Xabashida iyo qolyahan cusubi, waxay la yimaadeen hannaan ay ku saantirtaan, astur iyo gabbaadna u ah. Maanta waxaa taageerada lagu maldahaa NGO, Urur, Maamul goboleed (beeleed) iyo xil dawladeed, oo marka la barooranayo lagu gudbiyaa farriimaha iyo dhambaallada dilan.
Haddii aan garan karo, u qiilin karo qofka Xabashi xabiibsanaya, ee sababaha sare awgeed, aan u cabbiro karo ujeedkiisa, wali waxaanan garan, qofka AMISOM, oo dhawr dal ka socda, marka jab soo gaaro, ee Alshabaab hilfaha u qaadaan, waxa loogu barooranayo!
Laba garab, oo igu kor dagaallamaya, oo dirir iyo isdoox ka dhaxeeyo, mid axsaan iyo i sameeya wanaagna uusan jirin, marka laga reebo inta buunbuuninta, ii dhehda iyo ismuujinta ah, maxaan ku kala jeclaystaa, oo aan mid ka mid ah u soo dhaweystaa? Waliba, anigu waxaan garan karaa, qofka ay daacad ka tahay taageerennimada Alshabaab, ee qaddiyad iyo ku raacsan qasad, ee kan AMISOM, u barooranaya, ee qurbaha qoraallo leexsan iyo sadarro silloon ka soo diraya, maxaa lagu macnayn karaa?.
Waxaan aad uga gubtaa, marka aan arko, qof Soomaali ah, haddana, koofur ah, oo aragtidan sunta ah, oo kale, bulshada la dhexwareegaya! Gablan!
Waxay ka dhigan tahay, adoo xeyn Ari leh, Dhurwaa iyo Weer cunaya, inaad labadaa BAHAL, u kala eexato, adoo leh; kan baa dhib soo gaaray, oo kan kale kaaga roon! Anigu kaliya waxaan leeyahay; “Allaw laba DIBI, isku jaanqaad, oo mid noo jebi, aan jiljilannee!” GABLAN!
Laga yaabee, in aad is leedahay, war sidee kaa noqotay, AMISOM, saw ma ahan, midda Alshabaab ka saartay, Muqdisho iyo qaybo kale, oo dalka ah? Ma Alshabaab iyo AMISOM ayaad is garabdhigaysaa, ood waliba diidaysaa in AMISOM lala xanuusando?.
Horta mid aan kaa saxo, ee ah, in AMISOM ay Muqdisho iyo magaalooyin kale ka saareen Alshabaab, AMISOM kaama saarine, ciidanka dawladda iyo AMISOM dheh, maxaa yeelay, haddii aan askari Soomaali ka horrayn kana dambayn, dhinac socon, miyey ka saari leheed? Haddaa, yaa ka saaray, ma AMISOM mise ciidan isku dhafan? Isjir, yaan lagu qaldin, oon xaqiiqada lagaa indha saabin. Maalin kasta askariga dhimanaya, waa Soomaali, ee kuwa AMISOM goobta dagaalkaba waa ka cararaan, oo waa fulayo, aan geesinnimo lahayn, sida haddaba ka dhacday Leego!
Tan kale, haddii aad AMISOM, ku taageeree, kaliya inay Alshabaab magaalo ka saareen, haddi ogoow, magaalooyinkii Alshabaab laga saaray ammaan, nabad iyo waxaa ka jirtay kala dambayn, haba wehliso, cabburi, xorriyadyari iyo afduub, haddana, bac qafiif ayaa Dallorka lagu qaadan jiray, maantana, Dollar iska daaye, isbaaradii, leejadii iyo dilkii ayaa tarabtarab ka ah, haddaba, bixidda Alshabaab iyo gacanta AMISOM, teebaa taageero mudan? Wayga weydiin, illeyn, waxaan arkaa dadkoo laba Shaydaan, midna u Alle baryaya, kan kalana habaarayee!
Ujeedkii loo keenay, ee ahaa nabad dhalin, ilaalin iyo dhawrid, ma hayaan? Dalka waxay joogaa laga soo billaabo 2007dii, illaa haddee (2015) maxaa u qabsoomay, oo nabad ah 8 sano ka dib? Tan kale, AMISOM, ma rabitaan bulsho iyo waxay ku yimaadeen afti dadweyne, mise sheekooyin qolol mugdi ah lagu soo gaaray iyo go’aanno gocorro soo gaareen ayaa lagu keenay? Maxay dalka u qabteen, oo la taaban karo ama muuqda?.
Falalka gurracan, ee AMISOM koobid ma lahan, haddana, aan isku dayo, inaan dhawr qodob ka sheego, sida;
UL CADOW; waa fal laba afle ah, oo marna Xabashi iyo Kenya u adeegid ah, maxaa yeelay, markii horeba, waxaa loo keenay in lagu qariyo, jabka Xabashida, ka dibna, si shaar qaanuuni ah loogu yeelo Kenya iyo xabsho ayaa lagu daray AMISOM, ka dibna ay xasuuqooda halkii uga si wataan. Isweydii, waxa maalin walba goballada Gedo iyo Jubbooyinka loo duqeeyo? Is weydii, waxa Nabaddoonna Kismaayo iyo Beledweyne, loogu ugaarsado?.
Marna waa caddaan kale iyo cadow Soomaali u wakiil noqosho. Hubaal in Soomaaliya maanta meesha ay joogto aan loo rabin inay dib uga laabato, inay hore u socoto mooyee, haddana, danta koowaad iyo ta u dandabaysa, ma ahan mid Soomaali loogu danaynayo, oo waxaa ku danaysanaya nimanka bixinaya qarashaadka AMISOM iyo hubaal wiilasha qurbaha farriimaha cabaadka ah, ka soo qorayo.
XASUUQ: AMSOM inta ay dishay, ee xabbad iyo madfac ku gumaadday iyo inta ALSHABAAB dishay, yaa badan wali ma is weydiisay? Warcelintu ma gasho mala’awaale, ee aan tirakoob iyo kuugu soo gudbiyo qiyaasyo la sameeyey.
Run ahaantii markaad fiiriso tirakoobka sanadkii 2009-2010-ka , oo ay soo saareen hay’adaha Life Line Afrika iyo Shirkadda Isgaarsiinta Nation link, ee dadka dhintay ama dhaawacmay sanadkii 2009-ka 2010-ka, ayaad ogaanaysaa waxyeelladu inta ay la egtahay. Tiradan oo aad u badan, muujinaysa qatarka jirta inta ay gaarsiisan tahay, warxbintu waxay leedahay: “sanadkii 2009 iyo sanadkan 2010-ka, 2089 qofo oo rayid ah ayaa ku geriyoodeen dagaalladii iyo duqeymihii ka dhacay magaalada Muqdisha, ayna ku dhaawacmeen 6,753 qof.” Isweydii, ka hor iyo ka dib, AMISOM, meeqo ayey xasuuqday?
CUURYAAMIN DHAQAAALE: AMISOM waxay cuuryaamin ku haysaa dhaqaalaha dalka, haddii ay noqoto suuqyada Muqdisho, oo markii hore ay madfac iyo hoobiye ku burburin jirtay, halka wax walba oo ku saabsan adeeggooda ay qandaraas ku qaateen shirkado shisheeye, haddaba, miyaan la heli karin gacansato Soomaali, oo baahidaa buuxin kara? Ilama ahan in la waayey, ee ujeed ayaa looga gudbay.
KUFSI: Markii hore, dareen, shaki iyo waxay eheed, filasho, haddase, waxay noqoto caad iyo bannaan yaal, oo qof inkiri karaa ma jiro, maadaama ay diiwangalsheen hay’adaha xuquuqul Insaanka, ee QM iyo kuwo kalaba. Kufisga ayaa kala ehe, waxay u gudbeen, gabdhaha yaryar iyo xoolaha! Magan.
Si loo qariyo foolxumadaa, ayaa wasiirro qaarkood ku dhiirradeen, in ay dhahaan, lagama hadli karo KUFIGA! Haddii qofka sidaa yiri, lab ahaan lahaa iyo qoora dheere, wax la yaab ah iguma noqoteen, oo ina rag, waa isku aragti iyo damaaci, ee haddii qofka qarinta dalbaday, uu yahay dumar kale, wax aan ku sheego ma garan.
CUDURRO: Mar haddii AMISOM, kufsi iyo laga hadlayo guud ahaan ka ciidan ahaan, waxaa muhim ah, in la xuso, dawladaha ay ka yimaadeen in ay badi la ildaran yihiin xanuunka cudurka Aydhiska, ee dilaaga ah. La yaabku wuxuu ahaa, markii Yoweri Museveni, ku yiri, ciidan Soomaaliya u soo baqooli lahaa sanadkii 2007dii, in ay iska ilaalshaan gabdhaha Soomaalida, si aysan uga qaadin (gabdhuhu u qabadsiin) Aydhiska! Waxay ka dhigan tahay, qof ka tagaya meel cudur iyo daacuun ka dillaacay, ee u socda deegaan saxansaxo ah, ee lagu yiraa; waryaa, iska jir cudurku yuusan kugu dhicin, ee dadkaas waxba ha la wadaagin! GABLAN!
Dadka waxaan ka dareemayaa habacsanaan dabacsanaan dheeraad ah, marka loo eego sida xaalku ahaa sanado ka hor iyo siduu maanta yahay, waxaan dhammaan dadka ugu baaqayaa, inay ka hortagaan in Amxaaro ku faasho dhulka, kaca oo iska kaala gumaadka, haddii kale wadar dhimashadan dhammaad iyo baaba’ ayaan ka dhaxlaynnaa!
Dadkaygoow, kala garta gunnimo iyo gobnimo, kala garta qabiil iyo qaran, kala garta diin iyo danaysi, kala garta xukun doone iyo xoreeye, kala garta caadifad iyo dhab, kala garta xigto iyo xaasid, kala garta gacal iyo guhaad wade, kala garta gabbaadka iyo goobaynta.
Ugu dambayn. Abwaan Carroole Maxamad Kali (1870-1920) hoorraantii qarnigii 20aad noolaa, ahaana afmaal, indheergarad iyo aqooliye ayaa wuxuu xammili waayey, labada dulun, ee Ulalleydii qabqable Cali Yuusuf Keenadiid iyo gacanta uu ka helayo gumasyigii Talyaaniga ku hayeen tolkiisa iyo deegaankiisa, markaas ayuu ku gabyey, gabayguu caanbaxay, ee: “Iima kala roona!”. Carroole waxa uu yiri:
“Rugta Ceelcad nimankaa degee, ruugga ceel jebiyay
Iyo gaalka soo rogay rasaas, iima kala roona!
Riyo guray garoor iiga keen, iyo rug oonley ah
Iyo maansadii rogan ahayd, iima kala roona!
Sayidkii adduunkii rogaye, reero baabi’iyay
Iyo haatan rowlahakan yimid, iima kala roona!
Gabadhii an reereyn tegee, raalli noqon weysay
Iyo bahalka raarkayga ruday, iima kala roona
Nin rujaala ee boqorku rabiyo, raxan ulaaleyda
Raqda kii dhigiyo kii la yiri, “reerka orod caymi!”
Afartaas nimoo igu rigtamay, iima kala roona!”
AMISOM: Nabad ilaalin mise Iil badin?!
Gefafkii FAGAARAHA 17 lagu galay!